Nidaamka codsiyada soo gudbinaya | Cosmos koobi karayn
Posted in Space dhammaadka lahayn . xoog . sharciga . bannaan . Sharciga aasaasiga ah
A) Waa lagama maarmaan in wax warsataan Waxa uu ahaa cad si aad u. B) Ujeedada ahaa. The) maado waa in ay ahaadaan arki karo. D) Su'aasha waa inay muujiyaan danaha. D) Weydii su'aal waa in ay ahaataa oo keliya, haddii is ku guuldareystay inuu jawaab. Haddii kale waxa aan eegi doonaa qaar akhlaaq leh oo dhaqanka, oo haddii aad iyagoo doonaya inay inay ka fekeraan oo idinka mid ah oo aan ku faraxsanaan?
Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa on this, imtixaantid macluumaad taageeraya.
2) Sidoo kale, la aasaasay su'aasha waa in la gudbo si hoose “maamulka Machadka” qabashada xiriir la Ilaah, либо уполномоченными представителями “koonkan Council” (Golaha 24 Guurtida ee Kitaabka Quduuska ah). Taas oo dheeraad ah ku siin doonaa, haddii ay u arkaan in loo baahan yahay. Waxa ay noqon kartaa “kaniisadaha hay'adaha”, ama hay'adaha la mid ah dawlada hoose idman.
3) Space koobi karayn geli doonaa xiriir toos ah, isagaana leh, Yaa waxaa inta badan Ilaah wuxuu u yeedhay. Oo, haddii ay dhacdo baahida, doonistiisa.
Sharciyada Qaar ka mid ah Cosmos ee.
iyo) Waa sharci darro in uu ku qasbo ama sasabaya ashkhaas hagto, oo ku yaalla jirkooda loo baahan yahay in la joogo in Caalamka qaarkood noqon, si uu ku rumoobo naftoodu jeclaydna. Ama ku fikirno oo ku saabsan waxa, Waxa ay ku boorrinayaan in ay.
b) degree of “tupizny” Waxa aanu ku siin xaq u leedahay inaad weydiiso su'aalo iyo sabab this ma noqon karaan.
in) degree of waali Waxa aanu ku siin xaq u leeyahay inuu ku kici kor ku xusan dadka kale ee, “boodi (ama ku socdaan) by madaxdii shisheeye”, dilaan dad kale oo sabab this ma noqon karaan.
g) Wixii la doonayay oo si ayan u maqlin, ma aragto, ma aqoonsana xadgudubka gaar ah ma siin xaq u leeyahay inuu ka dhuunto shuruucda dabeecadda iyo Cosmos ee.
d) Waa sharci daro inaad ku dhibin dhaqdhaqaaqa doortay tamar runtan xataa haddii, haddii ay ku khasbanaadeen in ay ku sii jiraan maydadka soo jireenka ah si ay u World gaar ah.
waa) All Cosmos koobi karayn oo dhan iyo wax kasta oo, oo ku yaalla Space ku waynyahay, является частной собственностью Бесконечного Космоса.
ama) Protivozakonie sharci-darrada ah.
Qaybta Continued “sharciyada”.